Xayeysiin waa B2B dib u eegista khadka tooska ah qabashada iyo wadaagida faallooyinka dadweynaha ee macaamiishaada khadka tooska ah. Trustpilot waxay ogaatay in tijaabada macaamiishooda ay muujineyso an kororka sicirka beddelka illaa 60%. Xaqiiqdii, iyada oo lagu falanqeynayo in ka badan macaamiisha 2,000, waxay leeyihiin xisaabyahan soo saaray qaabka saxda ah ee xisaabinta kororka iibka ee la xiriira dib u eegista wanaagsan, dib u eegista xun, iyo dib u eegista xun ee la saxay.
Daacad u ahaanta macaamiisha waa qayb muhiim u ah qorshe kasta oo suuq-geyn ah, laakiin adigoon isticmaaleyaashaada dhammaadka marqaatiyada ku wadaagin khadka tooska ah si rajadu u baari karto oo ay si toos ah ula xiriiri karto macaamiisha, qorshahaaga daacadnimada macaamiisha ayaan dhameystirnayn. U adeegsiga barxad si otomatig ah u ururinta, isku duba ridka, iyo dhiirrigelinta dib u eegista macaamiisha ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiyada wax ku iibinaya khadka tooska ah.